Xuquudaada guriga taakuleynta | IVO.se
Xuquudaada guriga taakuleynta
Dhammaan dadka oo dhan waa i sku qiimo. Adiga iyo dhammaan carruurta kale iyo dhallinyaradu waxaad xaq u leedihiin in aad ku kortaan jawi aamin ah.
Xaq baad u leedahay in aad weydiisid oo aad warbixin ka heshid waxyaabaha ku taabanaya. Xaq baad u leedahay in aad soo jeedisid aragtidaada marka wax aadan ka helin la qorsheynayo. Xaq baadna u leedahay in aad heshid caawimaadda iyo taageerada aad u baahantihid.
Waxaad xaq u leedahay in aad:
Ogaatid sababta aad u deegantihid guri taakuleyn.
Ka qeyb qaadatid marka la qorsheynayo waxyaabaha adiga ku khuseeya, tusaale ahaan inta la qorsheynayo in aad sii degganaatid iyo meesha kabacdi aad u guureysid.
Ogaatid cidda ah xoghayagaaga arrimaha bulshada iyo sida aad kula xiriiri kartid iyada/isaga.
Gacanhayahaaga hey’adda arrimaha bulshada waxaa uu ma’uul ka yahay in uu xiriir kula lahaado, kusoo booqdo, daba raacyana sida ay adiga wax kuu yihiin.
Keli haan ula hadashid xoghayahaaga arrimaha bulshada.
Sheegtid sida aad wax u aragitd laguna dhegeysto.
Aan ciqaab laguu geysan.
Ogaatid waxa lagaa qorayo. Waxaad xaq u leedahay in aad weydiisid haddii ay jiraan wax aadan fahmin ama dooneysid in aad wax kasii ogaatid.
Haddii aad u aragtid in ay wax qaldanyihiin waxaad xaq u leedahay in aragtidaada lagu qoro halka warbixintaada lagu geliyo.
Hey’adda adeegga bulshada ka codsatid waxa aad u aragtid in aad u baahantihid.
Ka dacwoo kartid go’aan hey’adda adeegga bulshadu ay kaa gaarto.
Dhahdid haa ama maya waxa ay hey’adda adeegga bulshadu kuu soo jeedineyso. Si hey’adda adeegga bulshadu ay tusaale ahaan go’aan uga gaarto ku meeleyntaada guri taakuleyn, HVB ama guri qoys markaas waxaa ay u baahantahay in ay OK kaa hesho adiga. Laakiin isku sidaas wax uma dhacayaan haddii uu yahay arrinku daryeelka LVU.
Dugsi ama hawlo kale
Heshid taageerada aad shaqada dugsiga aad ugu baahantihid.
Heshid caawimaad ku aaddan waxbarasho iyo hawlo kale
Degganaatid meel aamin iyo ammaan ah.
Ogaatid sharciyada iyo nidaamka mar kasta la raaco ee ka jira meesha aad deggantihid.
Laguugu ixtiraamo qof ahaantaada.
La hadli kartid shaqaalaha markaad u baahatid.
Si nabad ah u heysatid waxyaaba kuu gaarka ah.
Heshid daryeelka caafimaadka- iyo bukaanka iyo daryeelka ilkaha ee aad u baahantihid. (Haddii aad tahay 18 jir ama ka weyn oo aadan Swiidhan sharci degganaansho ku lahayn markaas waxaa ku khuseeya sharciyo gaar ah).
La xiriiridda waaliddiinta iyo asxaabta
La lahaatid xiriir waaliddiinta, walaalaha, guudmaanka ama shakhsiyaadka kale ee aad u aragtid in ay muhiim yihiin. Haddii wax kale la go’aamiyo markaas waxaa sida ay wax noqonayaan wax dheeraad ah kaaga sheegaya gacanhayahaaga hey’adda arrimaha bulshada.
Haddii la go’aamiyay daryeel LVO oo luguugu tala galay adiga hey’adda arrimaha bulshadu waxay go’aamin kartaa sida xiriirka tusaale ahaan waaladkaa uu u muuqanayo. Maxkamad ayaad abbiil uga qaadan kartaa go’aanka nuucaan ah.
Yaan la hadlayaa haddii aan qalad dareemayo ama ay si xun wax u socdaan?
Ugu horreyn waxaa habboon in aad la hadashid shaqaalaha guriga taakuleynta, ama qof kaloo weyn oo aad kalsooni ku qabtid.
Haddii aad aragtiyo ka qabtid sida arrinkaagu yahay, waxa laguu qorsheynayo ama aadan raalli ku ahayn sida aad waalidkaa ula kulmi kartid ama wax kale, waxaa habboon in aad la hadashid xoghayahaaga arrimaha bulshada.
Haddii aadan heli karin xoghayahaaga ama uragtid in aaney/uusan dan ka geleyn waxa aad sheegeysid, waxaad la xiriiri kartaa xoghayaha arrimaha bulshada madaxdeeda/madaxiisa.
La xiriir IVO
La xiriir IVO haddii aad dooneysid in aad xuquuqdaada wax ka weydiisid ama ka warrantid waxa aan si fiican u shaqeyneynin xagga hey’adda arrimaha bulshada ama daryeelka bukaanka iyo caafimaadka.
IVO waxaa ay leedahay nambar taleefan, e-mail iyo qoraal kula sheekaysi u gaar ah, kuwaas oo loogu tala galay carruurta iyo dhallinyarada, khadka IVO ee carruurta iyo dhallinyarada.
Xaq baad u leedahay in aad qarsoodi noqotid marka aad la xiriireysid IVO. Laakin haddii tusaale ahaan aad dooneysid in IVO ay baarto ama sii waddo kontaroolidda arrinka waa in badanaa aan waxbadan sii ogaannaa. Tusaale ahaan guriga taakuleynta ee ay khuseyso.
IVO waxay leedahay mas’uuliyad gaara in ay guryaha taakuleynta ku sameyso booqasho ilaalin sannad walba.
IVO ay kontarooleyso in hey’adda adeegga bulshadu ay xaqiijineyso in markaasi ay carruurta iyo dhallinyaradu ay helayaan daryeel iyo deegaan fiican oo tayo fiican leh.
IVO waxaa ay kontarooleysaa in hey’adda adeegga bulshadu ay arrinkaaga u maareyneyso si waafaqsan sharciyada iyo xeerarka jira.
Waxaad xaq u leedahay in aad IVO lahadashid adiga oo aan cidna fasax u weydiisan.